TAYO - Chapman Technology Co., Ltd.
Ku qanacsanaanta macaamilku waa himiladeenna ugu dambeysa!
Laga soo bilaabo fikradda illaa soo-saarka, waxaan u heellan nahay macaamiisheenna 'qanacsanaanta guud ee shay kasta oo la keeno iyo adeeg kasta oo la bixiyo. Our ISO: Shahaadooyinka 9001 waxay u taagan yihiin in ka badan diiwaangelin ay sameeyaan hay'adaha aqoonsiga; waa dhaqan geeddi-socod ku dhisan oo tayo nidaamsan iyo horumar joogto ah leh. Waxaa naga go'an inaan siino ilo qiimo leh anagoo si isdaba joog ah nafteena ugula tartameyno inaan kor u qaadno qiyaastayada tayada si aan uga badino waxyaabaha ay kafilayaan macaamiisheena dhamaan alaabooyinka cusub iyo / ama barnaamijyada dhaxalka leh.
Siyaasadeena Tayada ayaa ah “Daacadnimo iyo Ku Dhaqanka Sharciga; Tiknoolajiyada Hogaaminaya; Tayo sare iyo hufnaan; Macaamiilku Mudnaanta Siiyaa ”. Daacadnimadu waa nafta shirkadeena. Waxaan higsaneynaa inaan siino wax soo saar tayo sare leh iyo adeeg tayo sare leh macaamilkeena. Ku qanacsanaanta macaamilku waa himiladeenna ugu dambeysa. Dhanka kale, ballanqaadkeena ah inaan adeecno sharciga ayaa siinaya difaac weyn shirkadeena.
Maareynta Tayadayadu waxay ka kooban tahay afar waji oo waaweyn: Nidaamka Tayada, Qorshaynta Tayada, Xakamaynta Tayada iyo Tayeynta Tayada. Waxaan horumarinay oo qalab sax ah ku cabirnay iyo softiweer awood maamul software si loo hubiyo xakamaynta tayada wax ku oolka ah.
Falanqaynta qiimaha ee naqshadeynta sheyga iyo marxaladda horumarinta
Yoolalka tayada Qorshaha Tayada Mashruuca
Qaabka Fashilka Naqshadeynta iyo Falanqaynta Saameynta
Habka Fashilida Nidaamka Nidaamka iyo Falanqaynta Saameynta
Habka Ansixinta Qaybta Wax Soo Saarka
Xakamaynta Tayada alaab-qeybiyaha
Falanqaynta Qiimeynta / Soosaarka Cilmiga Injineernimada Qiimaha
Qalab wax lagu cabiro oo heer sare ah